100 ဘာသာစကားများနှင့် 160 ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသော! - shoppingdirect24.com - SD24
Home > 100 ဘာသာစကားများနှင့် 160 ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသော!
အလိုအလျှောက်ပေးမယျဆိုရငျသငျ့ရဲ့ငွေကြေးညာဘက်ထိပ်ကို ရွေးချယ်. ကျေးဇူးပြု. !
ကျနော်တို့ 100 ဘာသာစကားများကျော်နှင့် 160 ငွေကြေးအကြောင်းကိုဆက်ကပ်။
ငွေကြေးလဲလှယ်သည့်ခဏရေပန်းစားနှုန်းထားများအရသိရသည်ဖြစ်ကြသည်။ EURO နှင့်အခြား-ထက် EURO တန်ဖိုးများကိုအစဉ်အမြဲကိုက်ညီတဲ့။ အဘယ်သူမျှမကော်မရှင်သို့မဟုတ်မှုနှုန်းချိန်ညှိလျှောက်ထားနေကြပါတယ်။
အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပြီး sign-up, အထက်ပါ - သင် aditional လုံခြုံရေးအဘို့ကိုသာတခါငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်ရှိသည်မည်ဖြစ်ပြီးစနစ်သင်၏နောက်အလည်အပတ်ခရီးမှာမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။
မြေတပြင်လုံးဆိုင် 100 ဘာသာစကားများထက်ပိုမိုရရှိနိုင်ပါ!
တစ်ခုချင်းစီကိုဘာသာစကား, ဆိုင်သင်၏ဘာသာစကားအတွက်သီးခြား site ကိုအဖြစ်ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုဒါတစ်ဦးချင်း, အမျိုးမျိုးသောအင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ပိုင် sub-domain ရှိပါတယ်တူသော:
shoppingdirect24.com - အင်္ဂလိပ်အတွက်အဓိက site ကို, ခြေရင်းဘာသာစကား
de.shoppingdirect24.com - ဂြာမနျတွင်ဆိုင်
fr.shoppingdirect24.com - ပြင်သစ်
es.shoppingdirect24.com - စပိန်
pt.shoppingdirect24.com - ပေါ်တူဂီ
ဒါဟာစတာတွေ, ဘူဂေးရီးယားအာရဗစ်, Galician သို့မဟုတ်ဂရိ, ဂျပန်, တရုတ်, ဟီဘရူး, အင်ဒိုနီးရှား, ဟိန်သည်ဆိုပါကအားလုံးဘာသာစကားများရှိပါတယ်။ ရုံ selector box ထဲကရွေးယူကြ၏။
ဘာသာစကားကိုဘာသာပြန်ချက်ခြေရင်းဘာသာစကားအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ site မှဖျော်ဖြေနှင့်ဘာသာပြန်ချက်အရည်အသွေးကိုအာရုံကြောအဆင့်အထိဖြစ်ပါသည်, Google ကဥပမာများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲအဓိကအားဖြင့် syntactic ဘာသာပြန်ချက် Translate ဖြစ်ပါတယ်။
ရှာဖွေရေး function ကိုခဏမသက်ဆိုင်ရွေးကောက်တော်မူသောဆိုင်ဘာသာစကား၏, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစကားဖျော်ဖြေရမည်ဖြစ်သည်ဆိုင်ပလက်ဖောင်းပံ့ပိုးပေးသဖြင့်ကန့်သတ်သည်။